Pelikaan(Pelican) | NuuralHudaa
Allaattiin kun Pelikaan(Pelican) jedhama. Uumamni kun Ardii Antarkitikaa yoo taate malee, Ardiiwwan hafan hunda keessatti ni argama. Sanyiin uumama kanaatis saddeettu jira. Sanyiiwwan kunniin cufti naannawa qilleensa owwaa, qarqara lagaa fi haroowwan cinatti argamu. Jireenya allaattii kanaatiif bishaan haalaan barbaachisaadha. Bishaan malee jireenyi allaattii kanaa waan ta’uu miti. Soorata isaatis hedduminaan bishaanuma keessaa argata. Gaafa bishaan hin jirre jireenyi isaa rakkoo keessa jira jechuudha. Haa ta’u malee akkuma nuti hundi beeknu, qaamman bishaanii dachii tanarra jiran rakkoo hamaa keessa jiru. Balfi garagaraa gara bishaanii gad dhiifamu bishaan faalutti jira. Dabalataanis lubbu qabeeyyii akka qurxummii kan bishaan keessatti argaman miidhutti jira. Kun ammoo allaattiin kun soorata gahaa akka hin arganne dhiibbaa itti godheera. Sababuma faalama kanaarraa kan ka’e Allaattiin Pelikaan jedhamu lakkoofsi isaa haalaan xiqqaachutti jira. Allaattiin kun soorata argachuudhaaf bishaan keessa gad seenuu qaba. Yeroo kana akka tasaa osoo qurxummii qabachuuf deemu, kiyyoo ilmi namaa qurxummii qabatuuf gad dhiise keessa seenuun rakkina hamaaf saaxilamaara. Anis qophii kiyya kan duraatiin waa’ee allaattii kanaa isiniif dhiheessaa na waliin turaa.
Pelikaan allaattiiwan haalaan gurguddoo ta’an keessaa isa tokko. Dheerinni allaattii kanaa haala sanyiitiin garaagarummaa qaba. Inni xiqqaan seentimeetira 10 kan dheeratu yoo ta’u, dheeraan ammoo haga seentimeetira 15 dheerata. Ulfaatinni isaatis akkasuma garaagarummaa qaba. Sanyiin xiqqaan Kilograama 4.5 ulfaata. Guddaan ammoo haga seentimeera 13.6 ulfaata.Qoffeen isaa haalaan dheeraadha. Allaattii keessaallee dheerinna qoffeetiin tokkoffaadha. Akkasuma qoffeen isaa kun, waan akka korojoo gama jalaatiin qaba. Korojoon isaa kunis yeroo tokkoon bishaan leetira heddu qabachuu danda’a. korojoon isaa kun hedduminaan soorataa fi bishaan kuusuuf kan tajaajilu ta’us, yeroo qilleensi akkaan oowwu qaama qabbaneessuufis ni tajaajila. Allaattiin kun wayta oowwI itti hammaatu, korojoo isaa san garanaa garas hafarsuudhaan qaama isaatiif qabbana kenna. Walumaa galatti, Pelikaan qaama haalaan guddaa, miila gabaabaa, qoffee fi koola haalaan dheeraa ta’e qaba.
Pelikaan Allaattii guddaas ta’u samii irra barrisuu irratti rakkoo hin qabu. Yeroo qilleensi haalaan owwutti, lafarraa meetira kuma 3 ol ol fagaatuun samii keessa barrisuu danda’a. qubbeen isaa jidduu ammoo tishuu ykn gogaa haphiitu jira. Kunis allaattiiwan naannawa bishaanii jiraataniif faaydaa guddaa qaba. Soorata isaanii hedduminaan bishaan keessaa waan argataniif, bishaan keessa daakuudhaaf gogaan haphiin kun tajaajila guddaa kenna. Haaluma kanaan Pelikaan bishaan keessas rakkoon malee sosocho’uu danda’a jechuudha.
Pelikaan hedduminaan qurxummii soorata. Dabalataanis lubbu qabeeyyii biroo kan naannawa bishaanii jiraatan ni soorata. Soorata hedduminaan qilleensa gubbaa barrisuudhaan barbaaddata. Ijji isaa haalaan jabaa waan ta’eef, waan bishaan keessa jiru qilleensuma gubbaa ilaalee adda baafata. Kana booda, waan argate san qabachuudhaaf saffisa jabaan qilleensa gubbaa gara bishaanii seena. Waan ija irra buufate sanis qabateetuma deebi’a. Allaattiin kun gareenis ni adamsa. Gareedhaan walitti heddummaatani koola isaaniitiin bishaan faffacaasanii booressu. Yeroo kana qurxummiileen heddu jeequmsa kana dheefa gara qarqara bishaanii utaalu. Achi booda rakkoo takka malee warra gara qarqara bishaanii dhesse kana qabataa sooratu.
Pelikaan Allaattii garee uumee qubsuma guddaa keessa jiraatuudha. Qubsumni tokkos miseensota 100 ol qabaachuu danda’a. Yeroo wal qunamtii wal hormaataatti, kormaaleen garee tokko keessa jiran agarsiisa garagaraa irratti hirmaatuudhaan, qalbii dhaltuu hawatuudhaaf dorgomu. Dorgommiin isaaniitis dandettii addaa Rabbi isaaniif kenne irratti bu’uura ta’a. kormaaleen Pelikaan dandeetti bifa kokkee, korojoo fi qoffee isaanii jijjiiruudhaa qabu. Kanaafuu dhalaa duratti bahuudhaan bifa garagaraa mul’isuun wal dorgommii taasisu. Inni moohate carraa wal qunnamtii wal hormaataa raawwatuudhaa argata. Kormaan moohate kun carraa wal qunnamtii raawwachuu qofa osoo hin taane, goojjoo hanqaaquun keessatti kunuunfamtu ijaaruunis dirqama isaati. Dhalaan wal gargaaranii goojjoo ijaaru. Kana booda dhalaan Pelikaan hanqaaquu hanga sadihii qofa hanqaaqxi. Ji’a tokkoo oliif eega hammatteen booda ilmoolee keessaa yaafti. Ilmoon kunniinis haga of danda’anii soorata adamsuu jalqabanitti, qoffee haadhaa keessaa soorata fudhataa guddatu. Avreejiidhaan Allaattiin Pelikaan tokko waggaa 10 hanga 30 jiraachuu danda’a.
Rabbiin keenya waan hunda haala garagaraa keessatti uume. Uumama hunda dizaayinii garagaraatiin akka ofii fedhetti uume. Dizaayiniin inni tolchu ammoo mudaa takkallee hin qabu. Allaattii Pelikaan kanas akka ofii fedhutti haala qilleensaa inni keessa jiraatuun wal simsiisee uume. Osoo miilli Pelikaan gogaa haphii san qabaachuu baatee, bishaan keessa daakuun heddu itti ulfaata ture. Rabbi ammoo allaattiin kun rakkoo malee akka jiraatu qaama san badhaase. Kormaaf ammoo dandeetti bifa kokkee, qoffee fi korojoo jijjiiruudhaa kenne. Kanaanis fedhii qaama isaa akka guuttatu isa dandeessise. Kana booda ati dandeettii akkanaa ni qabda jedhee isa barsiise. Wanti kun hundi waan akka tasaa argame osoo hin taane, waanuma Rabbiin keenya guyyaa duraa tolchee uumeedha. Inni waan hunda irratti danda’aadha.